Masakadza finds favour ahead of Zimbabwe's triple tour - NewZimbabwe.com Masakadza finds favour ahead of Zimbabwe's triple tour - NewZimbabwe.com
Masakadza finds favour ahead of Zimbabwe’s triple tour
13th April 2017 Sport
HARARE: Hamilton Masakadza had played only one of Zimbabwe’s five ODIs this year, but having been selected among the touring party to go to the Netherlands, Scotland in June and Sri Lanka later, he could hope for a little more game time.
Masakadza’s only ODI in 2017 came against Afghanistan and he fell for 5 off 17 balls. However, the 33-year old made a hundred for Zimbabwe A against Canada in Harare to perhaps persuade the selectors.
Much like Masakadza, Sikandar Raza played only one game of the Afghanistan series – his only ODI in 2017 – but he too was backed to perform. Chigumbura, though picked for that series, did not play in any of the matches and his previous appearance in international 50-over cricket dated back to October 2016.
Only the top-eight teams on the ICC rankings gain automatic qualification into the showpiece event. Zimbabwe, down at No. 11, will have undergo the grind of a cut-throat competition featuring the best teams outside of international cricket and finish among the top two to have a chance at playing the 2019 World Cup.Advertisement